Waraanni Bilisummaa Oromoo biyya Erteraa jiru guyyaa har’aa gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti sossohe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaraanni Bilisummaa Oromoo biyya Erteraa jiru guyyaa har’aa gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti sossohe.
Waraanni Bilisummaa Oromoo biyya Erteraa jiru guyyaa har’aa gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti sossohe.
(SBO/VOL – FULBAANA 14,2018) Rakkoo siyaasaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduu baroota lakkoofsise karaa nagaan furuuf ABOn fi Mootummaan Itophiyaa waliigaltee Hagayya 07,2018 irra gahan irratti hundaa’uudhaan WBOn biyya Erteraatti argamu gara Oromiyaatti guyyaa har’aa Fulbaana 14,2018 sossoheera.
Wabii fi Gaachana ummata Oromoo kan ta’e WBOn biyya Erteraa jiru wayta geggeessamu kan haasawaa taasisan Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa, WBOn yeroo biyya seenu dirqama guddaan akka isa eeggatu eeranii, qabsoon Oromoo gulantaa haaraatti waan ceheef kana booda qooda keenya bahuuf ummata keenya keessatti sochoona jedhaniiru.
Gaggeessaa WBO Erteraa irraa gara Oromiyaatti sossohe kana irratti Ajajaan WBO Jaal Abdii Raggaasaa, miseensota Shanee Gumii – Gumii Sabaa ABO Jaal. Yaddii Abdushakur, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, Weellistuu Ilfinash Qannoo, gaazexeessitooti Oromoo fi firootni qabsoo Oromoo argamaniiru.
Haamilee fi anniisaa guutuun WBO simachuudhaaf Autobusootni baay’een dhufaniiru. Isaan wajjin simannnaaf hanga Eritraa keessaatti kan dhufan poolisootni Oromiyaa fi namootni kaan WBO wajjin wayita wal simatan namni ijaan arge, firoota bara dheeraa booda walargan, miira ittiin walmararfatan itti fakkaachuu hin oolu.
#OLF soldiers return #Oromia this morning, September 14, 2018.
The soldiers cross the Ethiopian border from Eritrea via #Zalambessa.
Qeerrowwan Godina Addaa Oromiyaa irraa sa’aatii ammaa kana Magaalaa Guddoo Oromiyaa Finfinnee bifa kanaan seenaa jiru
ዛሬ በፍቅ ዞን በዱሁን ከተማ የኦብናግ ታጋኞች ደማቀ ቅብብል እንደተደራገላቸው ታወቂ !!!